Izindaba - Chamber of Commerce Competition Awards
Umcimbi wokuvulwa kwempi yeYun Baituan ngo-2020 wethulwa ngo-Agasti 15. Inkampani yenza uhlelo olucacile lwale mpi, futhi wonke umuntu wasebenza ndawonye futhi wasebenza isikhathi esengeziwe ukuze athole udumo kule nkampani. futhi usungule imiklomelo.
Ngesikhathi sempi yegumbi leCommerce Corps, izidumbu zethu "izidumbu ezidumayo" umphathi ngamunye webhizinisi uyahlangana ukunikeza izeluleko nokuhlela, sifunda komunye nomunye ukuziqinisa. Bobabili umphathi nabasebenzi basebenzise wonke amandla abo ekulweni
Emcimbini wokuklonyeliswa, izinhlelo ezahlukahlukene ezilungiselelwe yiLegion, ukwabelana kwabaphathi beKomidi leLigi leLegion eliwinile, kanye nohlelo lokusebenzisana lwemibuzo yolwazi nokuphendula konke kwenza imiklomelo icace, imangalisa futhi ithakazelise. Ukwabelana kwabaninimabhizinisi, masiqonde ukuthi kukhona izikhala, ekuphathweni nasolwazini lobuchwepheshe zinethuba lokwenza ngcono. Iphrojekthi ehlelwe yiChamber of Commerce yenze amabhizinisi ethu e-Hebei angaphandle ahlangana kakhulu.
Inkampani yethu ifingqa lo mncintiswano, isebenzisa amandla abanye futhi inciphisa igebe. Ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, sizoqinisa ithimba lethu lebhizinisi futhi sithuthukise imodeli yethu yokuphatha. Umndeni wenkampani yethu uzobukeka kabusha. Izinga eliphakeme lamakhono obuchwepheshe ukuhlangabezana ne-League War eyikhulu.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngathi, xhumana nathi ukuze usijoyine. Sizimisele ukusebenzisana nabantu abafisa ukwenza imodeli yokuhweba yamazwe omhlaba futhi sibone ukubaluleka kwenkampani nabantu ngabanye. Siyethemba ukuthi ngaphansi kokuqondiswa kwamaphupho ethu, sizokufeza ukunqoba kwamakhasimende ethu, izinkampani kanye nabasebenzi!
Ukuhlonishwa komuntu siqu